10 युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा आइसल्याण्ड > 10 युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू
बलौटे तटहरू, चट्टान दृश्य, सफा निलो पानी, र आश्चर्यजनक सर्फिंग समुदायहरू, यी १o सबैभन्दा महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू सबै स्तरहरूमा सर्फरहरूको लागि उपयुक्त छन्. इटालियन तटबाट टाढा डेनमार्क, र पोर्तुगल, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. गोड्रेवी बीच, इङ्गल्याण्ड
जब समय सहि हुन्छ, तपाईं केहि महाकाव्य लामो पर्खाल लेफ्ट्स र अधिकार सवारी हुन सक्छ. हो, एट्लान्टिकद्वारा गोद्रेवी समुद्र तट यूरोपमा सबैभन्दा महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू मध्ये एक हो. कोर्नवेल मा स्थित छ, मध्येको एउटा युरोपमा सब भन्दा मनमोहक तटीय शहरहरू, यो समुद्री तट सर्फ समुदायमा एक पूर्ण मनपर्ने हो.
गोडरेवी समुद्र तट सेन्ट इभ्स बेको अंश हो, र गर्मी मा, तपाईको यहाँ धेरै स्थानीयहरू भेट्टाउनुहुनेछ गर्मिको बिदा. प्रायः सूर्यबाज, सूर्य मा महल निर्माण, वा लाइटहाउसको प्रशंसा गर्दै, यो कुरा थाहा छैन कि गोद्रेवीले युरोपमा केहि राम्रा फुलहरू प्रदान गर्दछ.
जब: वसन्त, अप्रिल सफा तरंगहरूका लागि.
2. युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू: Peniche Portugal
लिस्बन एयरपोर्टबाट एक घण्टा, युरोपको दोस्रो सबैभन्दा महाकाव्य सर्फ गन्तव्य पोर्तुगलमा तपाईको लागि कुर्दै छ. Peniche वास्तवमा पोर्चुगल को समुद्री तट मा एक प्रायद्वीप हो, जसले वर्षभरि पौराणिक छालहरूको लागि ठूलो सर्तहरू सिर्जना गर्दछ. यसबाहेक, पोर्तुगल समुद्री तटहरू केहि हुन् युरोपमा सबै भन्दा काल्पनिक तटहरू.
उत्साहजनक बिन्दु ब्रेक, स्यान्डबार चट्टानहरू, आश्चर्यजनक लामो समुद्री किनारको अतिरिक्त, Peniche सर्फिंग स्वर्ग बनाउनुहोस्. Peniche एक प्रायद्वीप हो जबकि, त्यहाँ बढी छन् 30 यसको तटमा सर्फिंग स्पटहरू, र सर्फिंग गियर भाडामा धेरै ठाउँहरू. दिमागमा राख्नुपर्ने एउटा कुरा यो हो कि तपाइँलाई सबै वर्ष भर एक वेटसूट चाहिन्छ, चिसो पानी तापमान को कारण.
जब: अक्टोबर सेप्टेम्बर
कहाँ: फोज डो एरेल्हो शुरुआती र पेशेवरहरूको लागि पेनिचेको उत्तरी बालुवाको अद्भुत खिंचाव हो, लाईनअपमा पहुँचको लागि धन्यबाद. नीलो झण्डा समुद्र तट सुपरट्यूबोस छ जहाँ तपाईं यूरोपमा सबैभन्दा प्रसिद्ध लहर सवारी गर्नुहुन्छ, छिटो र उग्र. त्यसैले, जब सम्म तपाईं एक अनुभवी surfer हो, यो तरंगले तपाईंलाई कडा गरी लैजानेछ.
लहर: 80 सेमी 2.6 एम.
3. बुन्डोरन, आयरल्याण्ड
विश्वको लुभावो समुद्री किनारमा, आश्चर्यजनक चट्टान दृश्य र किनारमा किनारहरूको साथ, डोनेगल काउन्टी आयरल्यान्डमा सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्रहरू मध्ये एक हो. आयरल्याण्डको बुन्डोरन सहर युरोपमा सुपर-उन्नत सर्फरका लागि उत्तम सर्फिंग स्पटहरू मध्ये एक हो.
Bundoran is home to the most famous waves, चुचुरो. पीक उत्तम बायाँ हो, बलियो र छोटो. त्यसैले, उत्तम लहर सवारी पछि तपाईं स्थानीय पबमा पिन्ट पिण्ड लिन सक्नुहुन्छ, स्थानीय सर्फरहरूको साथ.
लागि: उन्नत सर्फरहरू.
लहर: o.50 to 2.7 एम.
4. युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू: Klitmoller, डेनमार्क
माछा मार्ने डु boats्गा, सर्फरहरू, र बलुई समुद्री समुद्री तट समुद्री तटको बैठक हो जुन तपाईंले क्लाइमोलरमा देख्नुहुनेछ. यो फ्रेम र मौसम अवस्था के हो क्लिटमोलरको सानो शहर "चिसो हवाई" को नाम कमाए”.
सर्फिंगको अतिरिक्त, उत्तरी यूरोपमा क्लाइडमोलर वाइन्डसर्फिंगका लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो. त्यसैले, तपाईं सर्भरहरू वर्षभर छालहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ. क्लीटमोलरको बारेमा अर्को अचम्मको कुरा तपाईंको निकटता हो राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको संग्रहालयहरु, जहाँ तपाईं वाइकिंग कथाहरूबाट प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ, उत्तम छाल समात्नु भन्दा पहिले.
किन: उत्तम मौसम अवस्था, सबै सर्फरहरूको लागि, वर्षैभरि.
5. ला ग्रेभियर वेव, बियारिट् फ्रान्स
बिआरिट्जका समुद्री तटहरू फ्रान्सका केही सपना देख्ने समुद्री तटहरू हुन्, युरोप छोड्नुहोस्. त्यसैले, यो कुनै आश्चर्य छ कि Biarritz यूरोप मा एक महान सर्फिंग गन्तव्य हो. ला Graviere तरंग सही तरंग पछि खोज मा दुनिया मा एट्लान्टिक Pyrenee को लागी surfers आकर्षित गर्दछ।.
जबकि होसेगोर प्राय: समुद्रको किनारमा छुट्टीको लागि आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ, यहाँको सर्फ समुदाय युरोपमा एक उत्तम हो. त्यसैले, तपाईं फ्रान्स मा प्रो surfers बाट कफी र croissants मा सही तरंग मा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, होसेगोर होस्टहरू वार्षिक WSL विश्व भ्रमण घटना.
लागि: सबै तहहरूमा र बोर्डहरूको सबै प्रकारहरूमा सर्फरहरू.
किन: बाक्लो ब्यारेलि beach बीच ब्रेक.
जब: शरद springतु वसन्त, अक्टुबरको मध्यबाट शहर बन्द हुन्छ, र तरंगहरू महाकाव्य ला قبرमा स्तरसम्म. त्यसैले, तपाईं यस महाकाव्य सर्फ गन्तव्य को लागी आफ्नो यात्रा को योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, र होटल वा समुद्र तट द्वारा भाडाका कारवां मा रहनुहोस्.
Wave आकार: 0.5 गर्न 2.5 एम.
6. युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू: लुइस को टापु, स्कटल्याण्ड
जहाँ उत्तरी फूलहरू एट्लान्टिक भेट्छन्, उग्र छालहरू र भयंकर हावाहरू, स्कटल्याण्ड मा सबैभन्दा महाकाव्य सर्फिंग स्थान सिर्जना गर्नुहोस्. एक अर्कामा जोडिएको एट्लान्टिक बाहिरी हेब्रीडियन टापुहरूमा लुइस टापु सबैभन्दा बढी हो ठाँउहरु स्कटल्याण्ड मा.
त्यसैले, आइल अफ लुइस एक सर्फिंग प्याराडाइज हो, तर केवल सब भन्दा उन्नत सर्फरहरूको लागि. उग्र छालहरू शुरुआतीहरूका लागि होईन जुन अझै प्याडल गर्न र बाक्लो र अधिकार प्रविष्ट गर्न संघर्ष गर्दछ.
जब: शरद र जाडो.
7. Scheveningen The Hague, नेदरल्यान्ड्स
विन्डसर्फि, kitesurfing, वा सर्फिंग अधिकारहरू, हेग छुट्टिहरु सर्फिंग को लागी एक महान गन्तव्य हो, केवल एक रेल यात्रा एम्स्टर्डम देखि टाढा. जे होस् यो मौसम खैरो जस्तो देखिन्छ र स्वागत छैन, तर सर्फरहरूको लागि, यो उत्तम तरंग सवारी को लागी उत्तम शर्तहरु सिर्जना गर्दछ.
तपाईं ११ किलोमिटरको तटमा सबै दायाँ फूलहरू समात्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी Scheveningen समुद्र तट मा. यहाँ, तपाईले सबै तहमा सर्फरहरू पाउनुहुनेछ र उत्तम सर्फ पसल र सुविधाहरू.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, हेग विश्वमा आफ्नो राजनीतिक भूमिकाका लागि परिचित छ, यो युरोपमा सबैभन्दा महाकाव्य सर्फ गन्तव्य मध्ये एक हो.
8. युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू: सनसेबास्टियन, स्पेन
फ्रान्स र स्पेन बीचको सीमामा, बास्क देश मा, सान सेबास्टियन एक डरलाग्दो समुद्रतट शहर हो, महाकाव्य सर्फिंग स्पटको साथ. यहाँ, तपाईं छालाबाट तपस बारहरूमा उफ्रिनुहुनेछ, र त्यसपछि सबैभन्दा सुन्दर स्पेनिश शहरहरू मध्ये एकमा रेतीले समुद्री किनारमा आराम गर्दै.
क्यान्ट्याब्रियासँग केहि आश्चर्यजनक समुद्र तटहरू र सर्फ स्थानहरू छन्, Zurriola समुद्र तट जस्तै, सैन सेबास्टियन मा परम सर्फिंग समुद्र तट. यो शुरुआती र मध्यवर्ती surfers को लागी आदर्श हो. तथापि, शानदार दृश्यहरूको लागि, ला कन्चा बीचमा छालहरू जाँच गर्नुहोस्.
किन: खुला बे मा छिटो बाँकी.
लहर: राम्रो रैप-वरपर उत्तरपश्चिम फूलियो.
जब: नोभेम्बर देखि डिसेम्बर.
9. वाटरगेट बे इ England्ग्ल्यान्ड, सेन्नेन कोभ
वाटरगेट खाडी बेलायतमा सर्फ गर्ने ठाउँ हो, र अंग्रेजी राष्ट्रिय सर्फिंग च्याम्पियनशिपमा भाग लिने सयौं सर्फरहरू सहमत हुनेछन्. विन्डसर्फि and र वेभ सर्फिंग यहाँ अत्यधिक लोकप्रिय छ, वाटरगेट बेलाई एउटा बनाउँदै 10 युरोपमा सबै भन्दा महाकाव्य सर्फिंग गन्तव्यहरू.
कर्नेलवेलमा सेन्नेन कोभ अर्को सास फेर्ने समुद्र तट र सर्फ गर्ने ठाउँ हो. सेन्नेन कोभ र प्रा स्यान्ड्स अचम्मका समुद्री तटहरूका साथ उत्कृष्ट सर्फिंग स्थानहरू हुन्.
किन: हावा र खुलापन सबै तहमा सर्फरहरूको लागि उपयुक्त छन्.
10. युरोपमा सबै महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू: सर्डिनिया, इटाली
सार्डिनियाको सुन्दर इटालेली टापु बन्द हुन्छ 10 युरोपको सूचीमा अधिक महाकाव्य सर्फ गन्तव्यहरू, भूमध्य सागर र रेतीले समुद्री किनारको साथ. यहाँ, तपाईं सानो देखि मध्यम छालहरू समात्नुहुन्छ, वा पश्चिम भागमा कडा छालहरू. यसबाहेक, संग 300 उत्तम दिन, सार्डिनिया एक सर्फिंग स्वर्ग हो.
तथापि, यदि तपाईं महाकाव्य फुल्काउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए सार्डिनियामा तपाईंको सर्फिंग बिदाको योजना बनाउनुहोस्, नोभेम्बर देखि जनवरी सम्म. कोस्टा भर्डे, सान निकोलोमा बग्गेरो, र Alghero मा Porto फेरो हो3of the beautiful and best beaches for surfing.
जब: सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर, वा मार्च देखि मे.
लहर: 3-4 एम.
मा एक ट्रेन सेव, हामी एक अद्भुत सर्फिंग छुट्टी को योजना मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं 10 युरोपमा सबै भन्दा महाकाव्य सर्फिंग गन्तव्यहरू. गन्तव्यको लागि रेल यात्रा र घरबाट टाढा काल्पनिक घर यात्राको सब भन्दा चाँडो र सबै भन्दा सस्तो तरीका हो.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० युरोपमा १० सर्वाधिक एपिक सर्फ गन्तव्यहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)